Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.5.6 Purani zano
Kuwedzera kune izvi magadzirirwo misimboti 5 zvayo, ndinoda kupa mamwe maviri zvimedu zano. Chokutanga, pakarepo kuita kuti iwe aigona kusangana kana zvamaronga vakawanda kutsigirana chirongwa chinonzi "Hapana aizotora chikamu." Ichokwadi kuti zvingava zvechokwadi. Kutaura zvazviri, kushayikwa Kupinda ndiko kuri pangozi kuti vakawanda kutsigirana muzvirongwa vanosangana. Zvisinei, kuramba ichi kazhinji chinovapo nokufunga pamusoro mamiriro ezvinhu nenzira isiyo. Vanhu vakawanda vanotanga pachavo uye kushanda panze: "Ndiri takabatikana; Handidi kuita izvozvo. Uye, handizivi munhu kuti aizoita izvozvo. Saka, hapana munhu aizoita kuti. "Pane kutangira pachako uye achishanda panze, Zvisinei, unofanira kutanga yose vanhu vanhu paIndaneti uye basa iri. Kana chete 1-mu-a-mamiriyoni evanhu ava chinhano, ipapo ramunoda aigona kuva kubudirira. Asi, kana chete 1-mu-a-bhiriyoni vanhu havagovani, ipapo ramunoda zvimwe kuva akundikana. Sezvo kunzwisisa kwedu hakuna kunaka kusiyanisa imwe-mu-a-miriyoni uye mumwe-in-a-bhiriyoni, tinofanira kubvuma kuti zvakaoma chaizvo kuziva kana zvirongwa zvichaita chamutsa zvakakwana Kupinda.
Kuti izvi yokuwedzera kongiri, ngatiendei kudzokera Galaxy Zoo, vanhu computation nezvenyeredzi chirongwa inokurukurwa nezvavo muchitsauko chino. Fungidzira Kevin Schawinski uye Chris Linton, nyanzvi mbiri agere ari pub Oxford kufunga Galaxy Zoo. Vangadai vasina kumborwara wafungidzira-uye kumbobvira aigona wafungidzira-kuti Aida Berges-pokugara-dzimwe-musha mai 2 anogara Puerto Rico-aipedzisira classifying mazana enyeredzi pavhiki (Masters 2009) . Kana, funga nyaya David Baker, ari zvipenyu achishanda Seattle kusimukira Foldit. Aigona haana kumbofungidzira kuti munhu McKinney, Texas ainzi Scott "Boots" Zaccanelli, aishanda masikati sechinhu mutengi kuti fekitari vharafu, vaipedza manheru ake rinopeta mapuroteni, pakupedzisira kumuka kuti nhamba 6 chepamusoro musi Foldit, uye kuti Zaccaenlli ungadai, kuburikidza game, muzviise pasi mumwe magadzirirwo mudanga zvikuru musiyano wezvinyorwa pamusoro fibronectin kuti Baker uye boka rake vakawana saka vaizotibata vakasarudza synthesize payo yezvirwere yavo (Hand 2010) . Zvechokwadi, Aida Berges uye Scott Zaccanelli tiri atypical, asi kuti isimba Indaneti: pamwe mabhiriyoni evanhu, zviri anowanika kuwana atypical.
Chechipiri, akapiwa kuoma ino vachifanotaura kutaurawo, ndingada kukuyeuchidzai kuti pave vakawanda kutsigirana chirongwa kunogona nengozi. Unogona yakawanda nesimba kuvaka kwegadziriro kuti hapana achada kushandisa. Somuenzaniso, Edward Castronova-aitungamirira mutsvakurudzi mumunda nemari chaivo nyika, aine ngaamuitire pamusoro $ 250,000 kubva MacArthur Foundation, uye vachitsigirwa ne chikwata Developers-apedza kusvika makore maviri vachiedza kuvaka rakapotsa nyika mukati raakanga kuitisa zvoupfumi kuedza. Pakupedzisira, rose kushandira wakavhiringika; hapana aida kushandisa rakapotsa nyika Castonova raMwari (Baker 2008) .
Apiwa nechokwadi pamusoro kutaurawo, izvo zvakaoma kubvisa, Ini pfungwa kuti unoedza kushandisa dzakaonda unyanzvi kutanga-up (Blank 2013) : kuvaka nyore prototypes vachishandisa kure-the-pasherefu Software uye ona kana uchikwanisa kuratidza de viabilidad asati bhizimisi iri mijenya pamusoro tsika Software kukura. Nemamwe mashoko, kana watanga mutyairi yekuedzwa, ramunoda haangaiti-uye hakufaniri-kutarira sezvo yakabwinyiswa sezvo Galaxy Zoo kana eBird. zvirongwa izvi, sezvo zvino ivo, Migumisiro makore nesimba hombe zvikwata. Kana basa rako riri kuenda kukundikana-uye kuti munhu chaiye wokuti-zvino unoda kukundikana kutsanya.